Chrome and Sync settings across multiple computers
Google Chrome နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်သုံးနေကြပေမယ့် သိပ်သတိမထားမိကြသေးတဲ့ Personal Stuff လေး တစ်ခုအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း Google Chrome သုံးနေပြီး တော်တော်ကြာတဲ့ အချိန်ထိ ဒီ Feature ရှိနေတယ် ဆိုတာ သတိမထားမိခဲ့ဘူး - ဒီနေရာကနေ သွားမယ် ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရမယ့် Personal Stuff အောက်က Sync feature အကြောင်းပါ။
Sync ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Sync ဆိုတာ တကယ်တော့ အတိုကောက်အခေါ်ပါ - သူ့ကို နောက်တစ်မျိုး အနေနဲ့ Synchronization - Synchronized လို့လည်း ပြောကြ ရပါတယ်။ Synchronization နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင် အသုံးပြုရာ နယ်ပယ်အလိုက် အဓိပ္ပါယ် ကွာခြားချက်တွေ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Computer science နယ်ပယ် တစ်ခုတည်းကနေ ကြည့်ပြီး အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမယ် ဆိုရင်တော့ သူဟာ လိုလားချက်တူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်ရပ်ကို တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ဖြစ်အောင် ပေါင်းစည်းပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တိုင်းဟာ နားလည်လွယ်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး - ဒီ့ထက်နားလည်လွယ်အောင် ဥပမာ ပေးကြည့်ပါမယ်။
Google Chrome နှင့် Sync settings
ကျွန်တော်တို့တွေ Google Chrome သုံးနေကြပြီ - Browser ဖြစ်တဲ့ အတွက် Themes လေးတွေ ပြင်တာ ရှိမယ်။ Bookmarks လေးတွေ မှတ်တာရှိမယ်။ လိုတဲ့ Extensions လေးတွေ သွင်းတာ ရှိမယ်။ စိတ်ကြိုက် အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးသွားတာတော့ ဟုတ်ပြီ - ဒါပေမယ့် အကြောင်း အမျိုးမျိုး Windows အသစ် Reinstall ပြန်လုပ်ရတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်စေ - တစ်ခြား စက်တစ်ခုကနေ Google Chrome ကို အသုံးချရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာဖြစ်စေ - တစ်ချိန်က ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားပြီးသား အခြေအနေအတိုင်း Browser preferences တွေ - Themes တွေ - Extensions တွေ - Bookmarks တွေ အားလုံးကို ပြန်ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ကြမလဲ - အားလုံးကို တစ်ကနေ ပြန်စပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်သွင်းကြမှာလား။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး အချိန်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ပျက်စရာလည်း ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ပြောရရင် လုပ်ဆောင်ထားပြီးသား အခြေအနေတစ်ခုကို နောက်ကွန်ပြူတာတစ်ခု ရောက်သွားလို့ ( ဒါမှမဟုတ် ) အခြေအနေတစ်ခု ပြောင်းသွားလို့ နောက်တစ်ကြိမ် ဒီ Process ကိုပဲ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် Google Chrome မှာ Sync settings ဆိုတာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သဘောက ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Chrome browser ကို Sync လုပ်ထားလိုက်မယ် ဆိုရင် - လက်ရှိ Browser မှာ ကိုယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Browser preferences တွေ - Themes တွေ - Extensions တွေ - Bookmarks တွေ အားလုံးကို Web ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Google account နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းပေးသွားမှာပါ။
ဒီလို Sync လုပ်ဆောင်ထားခြင်း အားဖြင့် စက်တစ်လုံးမှာ ကိုယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Google Chrome ရဲ့ အပြင်အဆင်အားလုံးကို နောက်စက်တစ်လုံးမှာ တစ်ကနေစပြီး လိုက်ပြင်ဆင်နေစရာ မလိုတော့ပဲ Personal Stuff [chrome://settings/personal] ကနေတစ်ဆင့် ဝင်ပြီး Sync ကို Set up လုပ်လိုက်တာနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အရင်တစ်ချိန်က ပြင်ဆင်ထားပြီးသား Google Chrome ရဲ့ အပြင်အဆင် အားလုံးကို တစ်သွေမတိမ်း ပြန်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sync feature အား အသုံးပြုခြင်း
Sync feature ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် အရင်ဆုံး လုပ်ဆောင်ထားရမှာ လက်ရှိ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ အားလုံး စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားပြီး Google Chrome Browser ကို Sync လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီ့အတွက် Personal Stuff [chrome://settings/personal] ကိုသွားပြီး Set up sync ကို ဝင်ပါ။
Sync လုပ်ဖို့ ကိုယ် အမြဲတမ်းသုံးချင်တဲ့ Google Account ကိုဝင်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့် ဆက်သွားရင် Sync everything လုပ်မှာလား - Customize လုပ်မှာလား ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခု တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Sync everything ရဲ့ သဘောက Browser နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်ပြင်ဆင်ထားသမျှ သိမ်းဆည်းထားသမျှ အားလုံးကို Web ပေါ်တင်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ Customize ရဲ့ သဘောကတော့ Bookmarks ဆို Bookmarks သီးသန့် - Extensions ဆို Extensions သီးသန့်ပဲ သိမ်းချင် သူမျိုးတွေအတွက် အသုံးတည့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Customize ကို ရွေးမယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ် Sync မလုပ်စေချင်တဲ့ ကဏ္ဍတွေကို Click ဖြုတ်ခဲ့ပါ။
ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ်ရွေးချယ်ပေးတဲ့ အတိုင်းပဲ Sync လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ လတ်တလောသုံးနေတဲ့ Browser setting ကို Sync လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ နောက်ကြိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း Windows အတင်အချ - Browser အဖြုတ်အတပ် - Computer အချိန်းအပြောင်း လုပ်ဆောင်ချိန်တိုင်းမှာ Google Chrome browser ကို နောက်တစ်ကြိမ် တစ်ကနေ စပြီး Setings ပြန်ချဖို့ မလိုတော့ပဲ။ Personal Stuff [chrome://settings/personal] ကိုသွားပြီး Sync ကို Set up လုပ်လိုက်တာနဲ့ Web ပေါ်မှာ သိမ်းထားပြီးသား ကိုယ့်ရဲ့ Browser settings က ကိုယ့် Google Chrome browser ထဲကို ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
12:44 PM LeaveaComment Read More
လတ်တလော ကျွန်တော်မကြာမကြာ ရေးဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ သုံးလေးမျိုး ရှိတယ် - အဲ့တာတွေက Google ၏ ပြောင်းလဲမှုများ အကြောင်း- Chrome အကြောင်း သိကောင်းစရာ နဲ့ Windows 8 အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း - နောက်ပြီး တစ်ခြား ရေးလက်စတွေလည်း တော်တော်များများ ရှိသေးတယ် - ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တော့ စိတ်ကူးတည့်ရာ လှည့်လှည့်ရေးတယ် - ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဟင်းတစ်မျိုးတည်း စားနေရရင် လျှာရင်းမမြတ်မှာ စိုးလို့ ကျွန်တော် ဟင်းပြောင်းပြောင်း ချက်ကျွေးနေတာပါ
အဲ့လိုနဲ့ ဒီနေ့ Firefox ရဲ့ ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုအကြောင်း ရေးချင်လို့ ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက် ရေးရမလဲ ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်ဟောင်း လိုက်ရှာတော့ ဒီ Firefox Tips & Tricks ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဟောင်းကို တွေ့တယ် - ရေးချင်တာက Firefox Tips & Tricks တော့ မဟုတ်ဘူး - သတင်းနဲနဲ ပိုဆန်နေတယ် - Firefox ၏ ပြောင်းလဲမှုများ အကြောင်းလို့ ပြောရမလား - ကျွန်တော်လည်း မသိတော့ဘူး -
ခုနောက်ပိုင်း Google Chrome ရယ် - Internet Explorer ရယ် Firefox ရယ် Browser သုံးမျိုး အကြီးအကျယ် အားပြိုင်လာတာ တွေ့ရတယ် - Internet Explorer ဆိုရင်လည်း IE9 ထွက်တာမှ ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးဘူး အခု Internet Explorer 10 Platform Preview ဆိုပြီး ထွက်လာပြီ - Google Chrome ဆိုရင်လည်း Canary build > Dev channel > Beta channel > Stable channel ဆိုပြီး Channel လေးခုနဲ့ တစ်ဟုန်ထိုးကို သွားနေတယ် - သူတို့တွေရဲ့ အားပြိုင်မှု ကြားထဲမှာ Firefox လည်း ပြတ်ကျန်ခဲ့လို့ မဖြစ်တော့ အခု Google Chrome ထုတ်နေတဲ့ ပုံစံအတိုင်း Channel လေးခုနဲ့ အဆင့်လိုက်သွားတဲ့ ပုံစံပြောင်းပြီး ဝင်ရောက်လာပြီ - အဲ့ Channel လေးခုက -
Nightly - ဒီ Channel အောက်မှာ ရှိတဲ့ Firefox အနွယ်ဝင် Browser တွေက တစ်နေ့ကို တစ်ခါ Update ပြောင်းတယ်။ တန်းမဝင်သေးတဲ့ အကြမ်းထည်ထုတ်ကုန် သဘောပေါ့။
Aurora - သူက ဘာနဲ့တူလဲဆို Google Chrome က Dev Channel နဲ့တူတယ် - အစမ်းသပ်ခံ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပေါ့ - ဒါပေမယ့် အချောထည် မဟုတ်သေးဘူး - Bugs တွေ ရှိမယ် - Feedback လုပ်ရမယ် - သူတို့ ထပ်ပြင်မယ်။ ဒီလို သဘော။
Beta - အတည်ပြုဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီ - ဘာတွေ အားနည်းချက်ရှိလဲ စမ်းသုံးခိုင်းထားတယ် - ပြဿနာ အနည်းအကျဉ်း ရှိနိုင်သေးတယ် - Feedback လုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ပေးမယ်။ ဒီအဆင့်ကို ရောက်လာတဲ့ Firefox တွေက ကုန်ချောဖြစ်ဖို့ တော်တော်နီးစပ်သွားတဲ့ အဆင့်။
Release - ဒါကတော့ ကုန်ချောအဆင့် - လူအများ သုံးနိုင်ပြီ - Stable ဖြစ်တယ် - ပြည့်စုံတယ် - အာမခံချက်ရှိတယ်။
အခု Firefox က အရင် Channel သုံးဆင့်ပဲ ရှိတဲ့ process ကနေ Aurora Channel ကို ထပ်တိုးပြီး လေးဆင့် ဖြစ်သွားပြီ - သူတို့သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ဒီအောက်မှာ အသေးစိတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါက ကျွန်တော့်စက်မှာ စမ်းသုံးထားတဲ့ Aurora ပါ။
စက်ထဲမှာလည်း Browsers တွေ တော်တော်များနေပြီ - တစ်ခုခုတော့ ပြန်ဖြုတ်ရဦးမယ်
4:07 PM LeaveaComment Read More
Internet Explorer9နှင့် သူ၏ အနာဂတ် ဆိုတာကိုတော့ ရေးခဲ့ဖူးပြီ - ပြောခဲ့ဖူးသလိုပဲ နည်းပညာလိှုင်းက ကြောက်ဖို့ ကောင်းလောက်အောင်ကို တိုးတက်မှု မြန်တယ် - မနေ့ကမှန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဒီနေ့ မှန်ချင်မှ မှန်မယ် - မနေ့ကအသစ်ဆိုတဲ့ Apps တွေ မနက်ဖြန်သစ်ချင်မှ သစ်တော့မယ် - ဒီလောက်လျင်မြန်တဲ့ အရှိန်ဟုန်တြွေကားမှာ ခုချိန်ထိ ကိုယ်တွေ ဖန်တီးသူ မဖြစ်နိုင်သေးပဲ စားသုံးသူ ဖြစ်နေတာရတာ စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး - ရတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျပါဘူး - တစ်နေ့ပေါ့ -
ဟိုတစ်လောလေးကတင် Internet Explorer9ထွက်တယ် - အတိအကျ ပြောရရင် March 14, 2011 21:00 PDT က - သူ့ကို Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Service Pack2ဒါမှမဟုတ် Windows Server 2008 SP2 တွေမှာ သုံးလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် Windows XP မှာ သုံးလို့ မရဘူး - ဒါကို အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်လောက်ပြီ - အရင်လကမှ Internet Explorer9ထွက်လို့ အသစ်လေး သုံးရပြီ ဆိုပြီး ပျော်မယ် မကြံနဲ့ - ဒီနေ့ April 12 2011 မှာ Internet Explorer 10 Platform Preview 1 ထွက်လာပြီ - ဟုတ်တယ် အဲ့လောက်ကို မြန်တယ် - မနေ့ တစ်နေ့ကမှ ထွက်တဲ့ Internet Explorer9ဆိုတာ Already out of date ဖြစ်သွားပြီ - သူ့ကို Download လိုချင်ရင် Microsoft's Test Drive စာမျက်နှာမှာ ယူလို့ ရတယ်။ ဘာတွေ Support ပေးလာသလဲဆိုရင် Additional web standards တြွေဖစ်တဲ့ CSS Gradients တို့ CSS3 Flexible Box Layout ဆိုတာတွေကို Support ပေးလာတယ် - တစ်ခြား Browsers တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ဘယ်တွေ အားသာချက် ရှိလာတယ် ဆိုတာတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို ကြည့်လိုက်ရင် ပိုပြီး မြင်သာပါတယ်။
အသွင်အပြင်ကတော့ လတ်တလော အခြေအနေမှာ Platform Preview အဆင့်မို့လို့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိသေးဘူး - အားလုံး အကြမ်းထည်ပဲ -
Url ရိုက်ချင်ရင် Ctrl+O ဖြစ်ဖြစ် - Page > Open ကနေ ဖြစ်ဖြစ် ခေါ်ပြီး ရိုက်လို့ ရတယ်။
Home page ကို ပြောင်းချင်ရင် Desktop ပေါ်က Internet Explorer Platform Preview Icon ကို Right click ပေးပြီး Properties ကနေတစ်ဆင့် Targat မှာ ခုလို ပြောင်းပေးရတယ်။
Bold နဲ့ ပြထားတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Website လိပ်စာပေါ့ -
သိထားသင့်တဲ့ Keyboard Shortcuts တွေကတော့ -
တစ်ခြား ထူးခြားချက်တွေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာရင် ကျွန်တော် ထပ်ပြီး ပြောပြပေးဦးမယ်။ Internet Explorer 10 Platform Preview 1 ကို စမ်းကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ Download ယူပါ။
3:21 AM LeaveaComment Read More
Firefox 4.0 Final Reviewer’s Guide
March 22 2011 က Firefox4ဆိုပြီး Mozilla ကနေ ထုတ်တယ် - အဲ့နေ့တည်းက ရေးပေးဖို့ တစ်ခြား အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး - တစ်ချို့လည်း Firefox4ကို ပြောင်းသုံးနေကြလောက်ပြီ - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက်တော့ တော်တော်များများ မပြောင်းကြသေးဘူး - အရင် Firefox 3.6 ... ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ လည်နေကြတာ တွေ့ရတယ် - ကျွန်တော် အကြံပြုချင်တာတော့ လတ်တလော Firefox သုံးနေသူများ version 3.6 ... ပတ်ဝန်းကျင် သုံးနေတယ် ဆိုရင် Firefox4ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် - Firefox4မှာဘာတွေ အားသာချက်ရှိလာတယ် ဆိုတာ အောက်မှာ ဆက်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ -
( 1 ) Firefox4နှင့် Menu style
Firefox4မှာ Menu style က အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလိုမျိုး စီမံခန့်ခွဲရ လွယ်ကူအောင် ဘယ်ဘက်ခြမ်း အပေါ်ဘက် အစွန်ကို ရွှေ့သွားပါတယ် - မြှားနေရာကို တစ်ချက် Click လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ Firefox ပြင်ဆင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ Options, Add-ons နဲ့ တစ်ခြား လိုတာအကုန်လုံး တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ် -
(2) Firefox4နှင့် Pinning App Tabs
Pinning App Tabs ရဲ့ သဘောက တစ်ချို့ သုံးနေကျ မဟုတ်သူတွေ အတွက် နဲနဲလေး စိမ်းနေနိုင်ပါတယ် - သူ့ရဲ့ သဘောက ကိုယ်အမြဲ သွားနေကျ လည်နေကျ Web စာမျက်နှာတွေကို Tab တစ်ခု အနေနဲ့ တစ်ခါတည်း တွဲပြီး ချိတ်ထားလိုက်တဲ့ သဘောပါ - ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ကwww.bing.com ကို Search engine တစ်ခု အဖြစ်နဲ့ အမြဲ သုံးဖြစ်တယ် ဆိုကြပါစို့ - ဒီလိုဆို သူ့ Tab ပေါ်မှာ Right click ထောက်ပြီး Pin as App Tab ဆိုတဲ့ နေရာကို click ပေးလိုက်ရင် အဲ့ဒီ့ Tab ဟာ နောက်ဆို သီးခြား ထပ်ဖွင့်စရာ မလိုတော့တဲ့ App tab တစ်ခုအဖြစ် Browser ဖွင့်တိုင်း ပွင့်နေမှာပါ -
တကယ်လို့ အဲ့လို Pin လုပ်ထားတာကို နောက်ပိုင်း သဘောမကျတော့ပဲ ပြန်ဖြုတ်ချင်မယ် ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရင်တုန်းက Pin လုပ်ထားတဲ့ Tab ပေါ်မှာ Right click ပြန်ထောက်ပြီး Unpin tab ပြန်ပေးလို့ ရပါတယ် - အဲ့လိုဆို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ -
(3) Firefox4နှင့် Windows7Taskbar Previews
ဒါကတော့ Tabs တွေ ဘယ်နခုပဲ ဖွင့်ထားထား ဖွင့်ထားသမျှ Tabs တွေကို Taskbar မှာ Previews အဖြစ်နဲ့ မြင်ရအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ် -Internet Explorer9သုံးနေတဲ့ သူတွေ ဆိုရင်တော့ Default အနေနဲ့ ပြင်ပြီးသား ဖြစ်နေတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ် - ( IE 8 မှာလည်း Individual Taskbar Previews က Enable / Disable ပေးလို့ ရပါတယ်။ ) ခု Firefox4မှာလည်း Windows7Taskbar Previews ကို ထူးထူးခြားခြား ပြင်ယူဖို့ မလိုပဲ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် -
Options > Tabs ရဲ့ အောက်မှာ ရှိတဲ့ Show tab previews in the Windows taskbar ကို Select ပေးပြီး ပြင်ယူပါ - ဒီလိုဆို နောက်ပိုင်း Tabs ဘယ်လောက်ဖွင့်ဖွင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Windows7Taskbar မှာ Previews အဖြစ်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ် -
(4) Firefox4နှင့် Menu bar အဟောင်း
အရင် Firefox အဟောင်းမှာတော့ Menu bar က Default အနေနဲ့ မြင်ရပြီးသား - ခု Firefox4မှာတော့ Menu bar က Default အနေနဲ့ Hide ထားပါတယ် - ဒါကို ပြန်ခေါ်ချင်ရင် Keyboard က Alt key ကို ခဏလောက် နှိပ်ထားပြီး လွှတ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် - Alt+F ကို တွဲနှိပ်ရင် ဖြစ်ဖြစ် Menu bar ကို ပြန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
(5) Firefox4နှင့် Private Browsing
Chrome သုံးနေကျ သူတွေတော့ Private Browsing ရဲ့ သဘောကို နားလည်ပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - အဲ့ အကြောင်းကို အင်တာနက်အတွင်း Software ရှာဖြွေခင်း ခေါင်းစဉ်အောက်က ဒီနေရာမှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် - အဲ့တာကြောင့် ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြီး မဖော်ပြတော့ပါဘူး - ခု Firefox4မှာလည်း Chrome ရဲ့ Incognito window နဲ့ သဘောချင်း ဆင်တူတဲ့ Private Browsing Mode ပါလာတယ် - ဒါပေမယ့် ခက်တာတစ်ခုက Firefox4မှာပါတဲ့ Private Browsing Mode ဟာ Chrome ရဲ့ Incognito window လိုမျိုး သုံးလို့ အဆင်မပြေဘူး - ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာက Firefox4မှာ Private Browsing Mode ကို ပြောင်းမယ် ဆိုတာနဲ့ လက်ရှိဖွင့်ထားသမျှ Tabs အားလုံး အပိတ်ခံလိုက်ရတယ် - Private Browsing Mode နဲ့ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ အားလုံးပြီးလို့ သူ့ကို ပိတ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် Firefox ကို ပြန်ဖွင့်တော့မှ ခုနက ပိတ်ခဲ့တဲ့ Tabs တွေကို Restore ပြန်လုပ်ပေးတယ် - အဲ့တာ တစ်ချက်တော့ ဆိုးတယ် - Private Browsing Mode ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ခေါ်ယူနိုင်ပါတယ် -
(6) Firefox4နှင့် Panorama
Panorama ကို Tab Groups လို့လည်း ခေါ်ကြတယ် - သူ့ရဲ့ သဘောက Tabs တွေ အများကြီး ဖွင့်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်အမြန်ပြန်လိုချင်တဲ့ Tabs တွေကို အလွယ်တကူနဲ့ ပြန်ရှာတွေ့နိုင်အောင် နဲ့ Tabs တွေ အများကြီးထဲကမှ တူရာတူရာ ကဏ္ဍအလိုက်စုယူနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Firefox4ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တစ်မျိုးပါ - သူ့ကို သုံးချင်ပြီ ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ညာဘက်ခြမ်း အပေါ်ထောင့်က Down Arrow ကနေ တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ - Ctrl+Shift+E ကို တွဲနှိပ်ခေါ်ယူပြီး Tabs တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီ့ထက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိချင်မယ် ဆိုရင်တော့ Firefox 4.0 Final Reviewer’s Guide ကို ဒီနေရာကနေ Download ရယူပါ - ခုလောက်ဆို Firefox4ပြောင်းလဲ အသုံးပြုမယ့် မိသားစုဝင်တွေ ဘာတွေ အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုတာ အထိုက်လျှောက်နားလည်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Download Firefox4Now!!
11:08 PM LeaveaComment Read More
Google Chrome 11 Beta With Speech-to-Text Feature
Google ကနေပြီး ခုနောက်အသစ်ထွက်တဲ့ Chrome 11 Beta မှာ Feature အသစ်တစ်ခု ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ် - Google Chrome မှာ ပြောင်းသွားတဲ့ New icons တွေ အကြောင်းတော့ ရေးခဲ့ပြီးပြီ - အခု အသစ်ထပ်ပေါင်းဖြည့်လိုက်တာကတော့ Speech-to-Text Feature တဲ့ - ထူးခြားချက်ကတော့ HTML5 spec တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကိုယ်က ကွန်ပြူတာကို စကားပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ Google Chrome ကနေ စကားပြန်လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့ - နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ မိုက်ကရိုဖုန်းကနေ စကားပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ဖမ်းနားထောင်ပြီး Google Chrome ကနေ စာသားအဖြစ်နဲ့ ပြန်ပြီး ဖော်ပြပေးနိုင်တယ် -
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နောက်ပိုင်း ဒီစမ်းသပ်မှု အောင်မြင်လာရင် ကီးဘုတ်ကနေ စာရိုက်ပြီး ကွန်ပြူတာကို ခိုင်းဖို့ မလိုတော့ဘူး - ဟိုကောင် ဘာရှာစမ်း - ဟိုကောင်ကို ပိတ်လိုက် - ဒီကောင်ကို ဖွင့်လိုက်တို့ လုပ်လို့ရတော့မယ်ထင်တယ် တကယ်လို့ Chrome 11 သုံးတယ် ဆိုရင် Speech-to-Text Feature ကို ဒီနေရာကနေ သွားရောက်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
Feature အသစ်ဆိုလို့သာ သွားစမ်းကြည့်တာ - ကျွန်တော် ပြောတာတော့ ဒီကောင် ကောင်းကောင်း နားမလည်ရှာဘူးဗျ - ပြောတာက hello hello hello ပါဆို ပြတော့ love love love တဲ့ - ဖြည့်တွေးလိုက်ပါတယ် - ငါ့ အသံထွက် အရမ်းကောင်းလို့ သူနားမလည်တာ နေမှာပါဆိုပြီး - စမ်းကြည့်နိုင်အောင်လို့သာ ရေးလိုက်တာ လောလောဆယ် အခြေအနေထိတော့ သိပ်မပီပြင်သေးပါဘူး
5:54 PM LeaveaComment Read More
Google Chrome နှင့် Chromium အကြောင်း သိကောင်းစရာ ဆိုပြီး ရေးခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော့်မှာ နောက်ထပ် ပြောပြချင်နေတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ရှိနေသေးတယ် - အဲ့တာက Google Chrome နဲ့တော့ မပတ်သတ်ဘူး - အဓိက ပတ်သတ်နေတာ Chromium - အကြမ်းဖျဉ်း ပြန်နွှေးရရင် Chromium က Open-source browser - Google Chrome ဆိုတာ အဲ့ဒီ့ Open-source browser "Chromium" ပေါ်မှာ အခြေတည်ထားတယ် - အဲ့တော့ နောက်ထပ် ဆက်ပြီး ကျွန်တော် တွေးကြည့်မိတာ -
Google Chrome ဟာ Open-source browser "Chromium" ပေါ်မှာ အခြေပြုထားတယ် ဆိုရင် Google Chrome လိုမျိုးပဲ Open-source browser "Chromium" ပေါ်မှာ အခြေပြုပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ တစ်ခြား Browsers တွေရော မရှိနိုင်ဘူးလား ??
တကယ်လို့ ရှိခဲ့တယ် ဆိုရင် "Chromium" ပေါ်မှာ အခြေပြုထားခြင်း တူတူ ဘာတွေက ဘယ်လိုများ ကွာခြား သွားကြသလဲ ??
ဒါမေးခွန်းတွေ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပါတယ်။ အဖြေကတော့ Google Chrome လိုမျိုးပဲ Open-source browser "Chromium" ပေါ်မှာ အခြေပြုပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ တစ်ခြား Browsers တွေ နောက်ထပ် ရှိပါသေးတယ် - ကျွန်တော်တို့ သတိထားမိကြတာရယ် - Google ရဲ့ အရှိန်အဝါနဲ့ တည်ဆောက်မှုအောက်မှာ မထင်မှတ်လောက်အောင် နေရာရလာတဲ့ Google Chrome ရဲ့ အရှိန်အဝါတွေကြောင့် တစ်ခြား Chromium-based browsers တွေက သိပ်ပြီး ထင်ပေါ်မလာ
ChromePlus - ChromePlus ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ သိပ်သတိမထားမိကြတဲ့ Chromium-based browsers တွေထဲက browser တစ်ခုပါ - ChromePlus ရဲ့ ထူးခြားချက်က Google Chrome မှာ ပါတယ်ဆိုတဲ့ functions တွေအားလုံး အတူတူပါပြီး Google Chrome မှာ မပါတဲ့ တစ်ခြား useful features လေးတွေ ( ဥပမာ - Mouse gesture, Super drag, IE tab, စတာလေးတွေ ) ထပ်ပေါင်း ဖြည့်ထားပေးပါတယ် - ( ChromePlus Features မှာ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ထားတဲ့ features တွေကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာကြည့်ပါ ) Google Chrome လောက် နာမည်ထွက်မလာ ခဲ့ပေမယ့် Browser ပြောင်းလဲ အသုံးပြုချင်သူတွေ အတွက် သတိပြုသင့်တဲ့ Browser တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ChromePlus ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို အောက်မှာ နမူနာ အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Comodo Dragon - Comodo firewall ဆိုတာ ကြားဖူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် - ဟုတ်ပါတယ် ခု Comodo Dragon ဆိုတာလည်း အဲ့ဒီ့Comodo Group ကနေပဲ ဖန်တီးထားတဲ့ Chromium-based browser တစ်ခုပါ - သိတဲ့အတိုင်း သူတို့ Group က Security နဲ့ Privacy ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ အဓိက ဖန်တီးတာမို့လို့ ဒီ Comodo Dragon မှာလည်း Security နဲ့ Privacy features တွေ ကောင်းအောင် အထူးပြုလုပ်ဖန်တီးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Comodo Dragon ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို အောက်မှာ နမူနာ အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Flock - Flock ကတော့ Social networking နဲ့ Media services တွေကို အသုံးများတဲ့သူတွေ အတွက် အဓိက ဦးတည်ချက် ထားပြီး တည်ဆောက်ထားတာပါ - သူ့ကို သုံးမယ်ဆိုရင် MySpace, Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, Blogger, Gmail, Yahoo! Mail စတာတွေနဲ့ အားလုံး integrates အသင့်လုပ်ထားပေးတယ် - တစ်ခုစီကို Sign in လိုက်ဝင်လိုက်ယုံနဲ့ နေရာအသီးသီးက Social services ကို Control လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားတယ် - တစ်ခြား features တွေလည်း အများကြီး ပါပဲ -
Iron - SRWare Iron ကလည်း Windows, Mac OS X နဲ့ Linux အားလုံးမှာ သုံးနိုင်တဲ့ Chromium-based browser တစ်ခုပါ - သူလည်း သိပ်တော့ လူမသိဘူး - ကွာခြားချက်ကတော့ တစ်ချို့ Google Chrome မှာပါတဲ့ features တွေက သူက ဖြုတ်ထုတ်ထားတယ် - ဥပမာ ( Automatic address bar search suggestions, Google Updater automatic installation, Bug tracking system ... ) ဆိုတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ပါ။
Rockmelt - ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် RockMelt လည်း Flock လိုမျိုးပဲ သူလည်း Chromium-based လုပ်ထားပြီး Facebook နဲ့ Twitter အဓိက ဦးစားပေးချိတ်ထားတယ် - Social services တွေ ချိတ်ဖို့ အဓိက ဦးစားပေးထားလို့လား မသိဘူး ကျွန်တော့်မျက်စိထဲတော့ အပြင်အဆင်က နဲနဲ မျက်စိရှုပ်နေသလိုပဲ - ကျွန်တော်ကတော့ Browser ဆို အမြင်ရှင်းနေမှ ကြိုက်တယ် - ဒီအောက်က Rockmelt ရဲ့ အပြင်အဆင်တစ်ချို့ပါ -
စမ်းသပ်သုံးစွဲချင်သူများ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အသီးသီးမှာ Browser တိုင်းရဲ့ Homepage အသီးသီးကို ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ် - သွားရောက် ရယူသုံးစွဲကြည့်ပါ -
5:11 PM LeaveaComment Read More
March 16, 2011 ရက်နေ့က Google Chrome ရဲ့ Logo အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောင်းလဲမှု တစ်ခု လုပ်ထားတယ်လို့ သိခဲ့ရတယ် - အကြောင်းက အရင် ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေကျ Google Chrome Logo ကို Dev Channel release အနေနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ Version 11.0.696.12 မှာ Logo Design ပုံစံ ပြောင်းထားတဲ့ ကိစ္စပါ - ပုံစံကတော့ သိပ်ထူးထူးခြားခြားကြီး မဟုတ်ဘူး - အရင် Google Chrome Logo က ဖောင်းကြွပုံစံ
ခု Google Chrome Logo ကတော့ ပိပိပြားပြားနဲ့ အနားသတ်တွေ ညှိထားတဲ့ ပုံစံ - အရောင်စပ် ထားတာလည်း ပိုငြိမ်သွားသလိုပဲ
Desktop icon အနေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ပိုသပ်ရပ်သွားတယ်လို့ ထင်မိတယ် -
ကျွန်တော်ကတော့ ခုပြောင်းသွားတဲ့ New logo ကို အရောင်တွေ ငြိမ်သွားလို့ ပိုသဘောကျမိတယ် - Google Chrome Logo ပြောင်းသလို Chromium logo လည်း ပြောင်းသွားတယ် -
ဒါတင်မကသေးဘူး Dev Channel release 11.0.696.12 မှာ Google Chrome Logo ကို အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ရွှေရောင်လည်း ပြောင်းလို့ ရသေးတယ် -
လုပ်နည်းက Google Chrome Dev Channel release 11.0.696.12 ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာတွေကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Install လုပ် - တစ်ခြား Linux နဲ့ Mac သမားများ Dev Channel Release ကို ဒီနေရာမှာ ယူပါ -
ပြီးရင် Desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ Google Chrome icon ကို Right click ထောက်ပြီး Properties ကို သွား - အဲ့ကနေပြီး Change icon ကိုဆက်ဝင် -
နောက်တစ်ဆင့်မှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ရွှေရောင် Google Chrome icon ကို ရွေးပေးလိုက်တာနဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ရွှေရောင် Chrome icon ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် -
တကယ်လို့ ဒီလို icon ပုံစံလေး ပြောင်းယုံလေးလောက်နဲ့ Dev Channel release ကို မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Google Chrome ကိုပဲ icon ပုံစံ ပြောင်းသုံးလို့ ရပါတယ် - Google Chrome Icons တွေချည်းပဲ သီးသန့်လိုချင်မယ် ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါနေရာကနေ Download ယူပါ - Icons တွေရရင် အသုံးပြုရမယ့်နည်းက အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားပြီး Browse ကနေ icon ရှိတဲ့ နေရာကိုခေါ်ယူပြီး ပြောင်းလိုက်ယုံပါပဲ -
3:12 AM LeaveaComment Read More
TweakIE9 for Internet Explorer 9
Internet Explorer9Final version ဆိုပြီး ထွက်လာတော့ Chrome နဲ့ ဒီ IE9 ကိုပဲ တစ်လှည့်စီ လှည့်သုံး နေမိတယ် - တစ်ခုရှိတာ Chrome က သုံးလာတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဘာပဲလိုလို တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် ဟိုကလိ ဒီကလိ ဟိုပြင် ဒီပြင် တော်တော်လေး လုပ်တတ်နေပြီ - Internet Explorer ဆိုတာကကျတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်းက မသုံးတာ - အဲ့တုန်းကတော့ အင်တာနက်သုံးချင်ပြီဆိုရင် အင်တာနက်ဆိုင်သွားရ တာပေါ့ - အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုပေမယ့် နက်ကလည်း Google ဝင်ဖို့ကို ၃မိနစ်လောက် စောင့်ရတယ် - ဒီကြားထဲ IE က အဲ့တုန်းက သုံးတာ IE6 ဖြစ်မလား မပြောတတ်ဘူး - တော်တော်ကိုဆိုးတာ - လေးလံလိုက်တာမှ လိပ်ကို ပိဿလေးတင်ထားသလား မှတ်ရတယ် - ပြင်နည်း ဆင်နည်းဆိုတာလည်း ဘာမှကို မတတ် - အဲ့လိုပေတေသုံးခဲ့တဲ့ ရက်လေးတွေ ပြန်သတိရမိတယ်
ခု Internet Explorer9ဆိုပြီး ဖြစ်လာပြီ - အရင်က သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ ပြင်တာ ဆင်တာလည်း Chrome လောက် သိပ်များများစားစား မသိဘူး - အဲ့လိုနဲ့ ဒီနေ့ စာလိုက်ဖတ်ရင်း TweakIE9 ဆိုတဲ့ Freeware ပြင်ဆင်ရေး Tool လေးတစ်ခု တွေ့လာခဲ့တယ် - ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Internet Explorer9က ကိုယ်မကြိုက်တာလေးတွေကို တစ်ခြားကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံလေးတွေ ပြင်လို့ဆင်လို့ ရအောင် ရေးထားပေးတဲ့ tweak tool လေး တစ်ခုပေါ့ - သုံးရတာလည်း အရမ်းလွယ်တယ် - ကျွန်တော့်လို End User တစ်ယောက်အတွက်တော့ သိပ်အဆင်ပြေတာပဲ - User Interface ကိုတော့ အောက်မှာသာ ကြည့်ပါ။
ပုံကြည့်တာနဲ့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ တန်းကနဲ နားလည်လွယ်တယ် - Internet Explorer9သုံးသူများအတွက်တော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုပါပဲ -
6:57 PM LeaveaComment Read More
Internet Explorer9RTM Available For Download
ဒီနေ့ Internet Explorer9Final version ထွက်တယ် - ဘာတွေ ဘယ်လိုကောင်းတယ် - ဘာတွေ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေဆိုတာကိုတော့ Internet Explorer9Platform preview ကတည်းက စရေးခဲ့တာ မို့လို့ ဆက်တိုက်ဖတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေဆိုရင် တော်တော်များများ သိပြီး ဖြစ်လောက်မယ် ထင်မိပါတယ် - Microsoft က ပြောတာတော့ Performance နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး IE9 ကို Low-end machines ( ဆိုလို Graphics cards စွမ်းဆောင်ရည် သိပ်မကောင်းတဲ့ စက် ) တွေမှာတောင် Performance ကောင်းစေမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် - ပြောတိုင်းယုံရတာမျိုး လက်သံမခံနိုင်လို့ ကိုယ်တိုင် IE9 Test drive မှာ စိတ်ထဲရှိတာလေးတွေ လိုက်စမ်းလိုက်သေးတယ် - အရမ်းကြီး နားမလည်တော့ IE9 နဲ့ Chrome ဘယ်ဟာပိုသာလောက် မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့တော့ မတတ်ခဲ့ဘူး - ဒါပေမယ့် Mozilla ထက်သုံးလို့ ပိုကောင်းတာတော့ လက်ခံမိတယ် - လောလောဆယ် စက်မှာတော့ Google Chrome ကို Default ထားပြီး IE9 ကို 2nd အနေနဲ့ သုံးနေဖြစ်တယ် - Mozilla ကိုတော့ ထိလိုက် မထိလိုက်ပဲ ( မကောင်းလို့ မဟုတ်ပါ အထိုင်အထနှေးတာ ကျွန်တော် သဘောမကျလို့ )
အဲ့တော့ RTM ထွက်ပြီဆိုတော့ ဘာတွေ ဖတ်သင့်မလဲ ဆိုတာ အင်တာနက်ထဲ ဆက်ပြီး လိုက်ကြည့်မိတယ် - အဲ့လို လိုက်ကြည့်ရင်း ဖတ်မိသိခဲ့တာတွေထဲက အကျဉ်းလောက်ကို အမေးအဖြေ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် - အကျယ်ကိုလည်း လေ့လာနိုင်အောင် Links တွေ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ
( 1 ) Internet Explorer9ကို ဘယ် OS တွေမှာ သုံးလို့ ရမလဲ ??
Windows7နဲ့ Windows Vista SP2 မှာ သုံးလို့ ရပါမယ် - Windows Vista SP1, Windows XP နဲ့ သူတို့ထက် နိမ့်တဲ့ Versions တွေမှာ သုံးလို့ မရပါ။
(2) Internet Explorer9Final version ကို ဘယ်မှာ Download လုပ်ရမလဲ ??
ဒီနေရာမှာ ယူပါ။ >> http://www.beautyoftheweb.com/#/download
( အဲ့ Link ကနေ ယူရင် Internet နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ပြီး Install လုပ်ငန်းစဉ်က အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် Internet connection မရှိတဲ့ အိမ်က စက်မျိုးမှာ Internet Explorer9Final version ကိုသွင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး - တကယ်လို့ သွင်းချင်မယ်ဆိုရင် Internet Explorer9Final Offline Installers ရှိဖို့လိုပါတယ်။ )
(3) Internet Explorer9Final Offline Installers ဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲ ??
အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွေမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
(4) Internet Explorer9Final Version မှာ ဘာထူးခြားမှုတွေ - ဘာတိုးတက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားသလဲ - ကျုပ်တို့ ဘာတွေ သိထားဖို့ လိုသလဲ ??
Internet Explorer9Final Version မှာ ပါဝင်လာမယ့် performance improvements, tracking protection, hang recovery နဲ့ တစ်ခြား သိထားသင့်တဲ့ features အသိတွေအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်ဖို့ Microsoft ကနေ Internet Explorer9Final Version နဲ့အတူ Internet Explorer9Fact Sheet ဆိုတာကို ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ ယူပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။
(5) Internet Explorer9ကို Windows7ISO နဲ့ slipstream ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ??
အပေါ်မှာ ရေးထားခဲ့တဲ့ Internet Explorer9Release Candidate က အကြောင်းအရာတွေ ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။
(6) Internet Explorer9ကို Uninstall ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမလဲ ??
(7) Internet Explorer9ကို တစ်ခြား Language နဲ့ သုံးချင်တယ် - Language Packs တွေ ဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲ ??
Download IE9 Language Packs for Windows7& Server 2008 R2
Download IE9 Language Packs for Vista and Server 2008
( 8 ) Internet Explorer9နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခြား လေ့လာသင့်သေးမယ့် နေရာတွေ ဘယ်နေရာတွေ ရှိဦးမလဲ ??
အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွေကို မဖြစ်မနေ လေ့လာထားသင့်ပါသေးတယ်။
Internet Explorer9now available to download
Internet Explorer 9's most useful keyboard shortcuts
6:10 AM LeaveaComment Read More
15+ Useful Google Chrome Extensions
ဒီအကြောင်းရေးဖြစ်ဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်တည်းက စပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့တယ် - ရေးဖို့ စိတ်ကူးထားတာ Google Chrome ရဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေလို့ ပြောလို့ ရတဲ့ Chrome Extensions တွေအကြောင်း - Chrome Extensions ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို စိမ်းနေသူတွေ အတွက် အကျဉ်းချုံး မိတ်ဆက်ရရင် Chrome Extensions ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အရင်က Mozilla Firefox မှာ အမြဲသုံးနေကျ Add-ons တွေရဲ့ သဘောနဲ့ တူပါတယ်။ ဆိုလိုတာ ဒီ Chrome Extensions / Firefox add-ons ဆိုတာတွေကို သုံးခြင်းအားဖြင့် Browsers တွေမှာ Default အနေနဲ့ မပါဝင်တဲ့ Features တွေ Functions တွေကို ကျွန်တော်တို့ ပိုသုံးနိုင်လာပါတယ်။
ဘယ် Chrome Extensions တွေက ကောင်းသလဲ ??
တစ်ခုခု သုံးရတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့ အမေးမျိုး လူတိုင်း မေးချင်ကြတယ် - Google Chrome Extensions တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးပါလို့ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ် - လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က Browser ကို သုံးစွဲပုံခြင်း မတူကြဘူး - တစ်ချို့က ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ Websites တွေမှာ စာလေးနည်းနည်းပါးပါး ဖတ်ယုံလောက်အတွက်ပဲ သုံးတယ် - တစ်ချို့က ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ စာဖတ်ယုံတင် မက - Blog ရေးတာ - Share လုပ်တာ - တစ်ခြား တိုလီမုတ်စ တွေ မျိုးစုံသုံးတာ စသဖြင့် မျိုးစုံ ရှိကြတယ်။ အဲ့တော့ Google Chrome Extensions ဆိုတာလည်း ကိုယ်က Browser ကို ဘယ်လိုသုံးမှာလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး အသုံးပြုသင့်တဲ့ Extensions တွေရဲ့ အမျိုးအစားတွေက ကွဲပြားသွားပါတယ်။
အကောင်းဆုံး နှင့် အကြိုက်ဆုံး၏ ကွာခြားချက်
ကျွန်တော်က Google Chrome ကို Default browser အဖြစ်နဲ့ သုံးတာဆိုတော့ တစ်ခုခု သုံးရတာ ကသိကအောက် ဖြစ်လာပြီဆို Google Chrome Extensions တွေ ကြိုက်သလောက် Install လုပ်လို့ ရတဲ့ ဒီနေရာကို သွားပြီး ကိုယ့်အတွက် သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ့် Chrome Extensions လေးတွေ လိုက်စမ်းလေ့ရှိတယ်။ တစ်ခုတင်လိုက် တစ်ခုချလိုက်နဲ့ အဲ့ထဲက Most Popular တို့ Top Rated တို့ စာရင်းဝင်တဲ့ Chrome Extensions တွေ တော်တော်များများ ကျွန်တော် မစမ်းဖူးတာ မရှိတော့သလောက်ပဲ တစ်ခြား Blog တွေကနေ Best Chrome Extensions ဆိုပြီး ရေးထားတာ တွေ့ရင်လည်း ကိုယ့်အတွက် အသုံးတည့်တယ်ဆိုပြီး အမြဲလိုလို ဖတ်ဖြစ်တော့ အဲ့မှာ ဘာကွာခြားချက် သွားတွေ့ရလဲ ဆိုရင် Websites တစ်ခုမှာ ဒါကိုသုံးသင့်တဲ့ Best Chrome Extensions စာရင်းထဲ ထည့်ထားရင်တောင် တစ်ခြားဆိုဒ်တစ်ခုမှာကျတော့ အသုံးတည့်တဲ့ စာရင်းထဲ မသွင်းတာ တွေ့လာရတယ် - အဲ့တာကြောင့် ဒီပို့စ်ကို ရေးဖို့ ခေါင်းစဉ်ရွေးတဲ့ နေရာမှာ "အကောင်းဆုံး" ဆိုတဲ့ စာလုံးကို မသုံးပဲ "အကြိုက်ဆုံး" ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ပြောင်းသုံးခဲ့တယ် - မြန်မာစကားက အသုံးအနှုန်းမတူရင် ရည်ရွယ်ချက် လွဲတယ် - အကောင်းဆုံးဆိုတာ ရွေးချယ်ဖို့ အမြောက်အများရှိတ့ဲ ထဲက အရွေးချယ်သင့်ဆုံးကို ဆိုလိုတာ - အကြိုက်ဆုံး ဆိုတာ အားလုံးထဲက ကိုယ် အနှစ်သက်ဆုံးတွေကို ရည်ညွှန်းချင်တာ - ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးကို မိသားစုဝင်တွေ အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် အကြိုက်ဆုံး Chrome Extensions တွေအကြောင်း မဖော်ပြခင် သိထားစေချင်ပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံး Chrome Extensions များ
ခု ဒီ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖော်ပြသွားမယ့် Chrome Extensions တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အသုံးအဝင်ဆုံးနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အတွက်လည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အသုံးဝင်ကောင်း ဝင်နိုင်မယ့် Chrome Extensions တွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
AdBlock - မရှက်တမ်း ဝန်ခံရရင် ကွန်ပြူတာစသုံးခဲ့ပြီး တော်တော်ကြာတဲ့ အချိန်ထိ AdBlock ဆိုတာကို ဘာမှန်း မသိခဲ့ဘူး - ခုတော့ AdBlock ရဲ့ မရှိမဖြစ် အရေးပါပုံကို သိလာခဲ့ပြီ - AdBlock ဆိုတာ Web စာမျက်နှာတွေပေါ်က Ads လို့ ခေါ်တဲ့ ကြော်ငြာ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကိုယ် Web စာမျက်နှာတွေ ကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ပါမလာအောင် အလိုလျှောက် Block ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့် Browser မှာ AdBlock ရှိမနေရင် Ads များတဲ့ Websites တစ်ခုခုကို loading ဆွဲတဲ့ အချိန်မှာ Browser က Websites မှာ ရှိနေတဲ့ Content တွေကိုသာ မက ဒီ ကြော်ငြာကဏ္ဍတွေကို Loading ဆွဲနေရတော့ Connection သိပ်မကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာဆို တော်ယုံနဲ့ Webpages က တက်မလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက တစ်ချို့ Ads တွေဟာ ကြော်ငြာ အမည်ခံပြီး Malware ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ပင်မရင်းမြစ်တွေ ဖြစ်နေတတ်တော့ အဲ့လို Ads မျိုးကို ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားလို့ ဖြစ်ဖြစ် အယောင်ယောင် အနနနဲ့ နှိပ်မိရာကနေ စက်ထဲ Virus ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
Google Mail Checker Plus - ကိုယ့် Gmail Account ထဲကို Mail ဝင်လာပြီ ဆိုရင် တော်ယုံ Account ထဲ ဝင်မကြည့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် - Gtalk ဖွင့်မထားပဲနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သိနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး - အဲ့တာတွေကို အဆင်ပြေအောင် Google Mail Checker Plus ကဖန်တီး ပေးထားပါတယ် -
Feedly - Feedly ဆိုတာ အင်တာနက်ထဲမှာ ဘလော့တကာ ပတ်ပြီး စာဖတ်တတ်သူတွေအတွက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ RSS Reader တစ်မျိုးပါ - သူ့အကြောင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုတာ့ ဒီနေရာမှာ ရှင်းခဲ့ပြီးသားမို့လို့ ထပ်ပြီး အထူးအထွေ ရှင်းဖို့ လိုမယ် မထင်တော့ပါဘူး - FeedSquaresဆိုပြီး Extension တစ်ခု ရှိသေးတယ် - အဲ့တာလည်း RSS reader တစ်မျိုးပါပဲ - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတော့ FeedSquares က စတိုင်လ် အသားပေးလွန်းအားကြီးတယ် - အရမ်းလန်လွန်းပြီး စာကျ သိပ်ဖတ်လို့ မကောင်းသလိုပဲ။
Google bookmarks - သူက Google bookmarks သုံးတဲ့ သူတွေအတွက် Google Chrome မှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Extensions တစ်မျိုးပါ - သူ့လိုမျိုးပဲ တစ်ခြား အမျိုးအစားကွဲ သုံးလေး ခု ရှိတယ် - ဥပမာ ပြရရင် Yet Another Google Bookmarks - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ jimmy.liang ရဲ့ Google bookmarks extensions ကို ပိုသဘောကျမိတယ်။ Bookmarks တွေ ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကြလဲ ဆိုတာ သိချင်သေးရင် အရင်က အကောင်းဆုံး Bookmark Management Tools များ ဆိုပြီး ရေးခဲ့တာ ရှိတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။
goo.gl URL Shortener - ဒီကတော့ အရမ်းရှည်တဲ့ URL တွေကို ချုံ့ဖို့အတွက် Extension တစ်မျိုးပါ - ဘာကြောင့် URL ချုံ့ကြရတာလဲ ဆိုတာ သိချင်ရင် Websites များ၏ URLs များအား အတိုချုံးခြင်းဆိုပြီး ရေးခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။ သူနဲ့ သဘောတရားတူတဲ့ နောက် Extension တစ်မျိုး ရှိပါသေးတယ် - အဲတာကတော့ bit.ly ပါ။
LastPass - LastPass ကိုတော့ တော်တော်များများ သိပ်သုံးကြဦးမယ် မထင်ဘူး - LastPass ဆိုတာ Free ပေးထားတဲ့ Password manager နဲ့ Form filler ပါ - LastPass မှာ ကိုယ် Create လုပ်ထားတဲ့ Account ကို Login ဝင်ထားလိုက်တာနဲ့ နောက်ပိုင်း ကိုယ်သွားတဲ့ Websites တွေမှာ Username တွေ Passwords တွေ ခဏခဏ ဖြည့်ဖို့ မလိုတော့ဘူး - ကိုယ် မှတ်ခိုင်းထားတဲ့ အတိုင်း သူက အလိုလျောက် Login ဝင်ပေးသွားတယ် - Username နဲ့ Password ခဏခဏ ရိုက်ရမှာ ပျင်းတဲ့ ကျွန်တော့်လို လူမျိုးတွေ အတွက်တော့ LastPass က သိပ်ကို အဆင်ပြေတယ်။
Screen Capture (by Google) - သူကတော့ Google ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ Screen Capture extension - ဘာဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ တင်ဖို့ မလိုဘူး - ဘာကီးတွေ Crack တွေမှလည်း မလိုဘူး - Extension တစ်ခု ရှိယုံနဲ့ လိုချင်တာ တော်တော်များများ လုပ်လို့ ရတယ်။ Screen Capture နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Software တွေအစား ခုလို Extension လေးတွေ သုံးလိုက်တာ ကောင်းတယ် - သူ့လို သဘောတရားတူတဲ့ တစ်ခြား Extensions တွေလည်း ရှိသေးတယ် - ဥပမာ - Awesome Screenshot - နှစ်ခုလုံး သုံးလို့ ကောင်းကြပါတယ်။ Screen capture တွေ ဘာကြောင့် သုံးကြရလဲ ဆိုတာ Screen Capturing Tools များအကြောင်း ဆိုပြီး ရေးခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Google Dictionary (by Google) - အင်္ဂလိပ်စာကို လူမျိုးခြား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖတ်ရင် Dictionary တော့ လူတိုင်းနီးပါး လိုပါတယ် - အဲ့အတွက် ဒီ Google Dictionary Extension ကို သုံးစေချင်တယ် - English - English ဆိုပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကျင့်သားရသွားရင် အများကြီး အသုံးတည့်သွားပါလိမ့်မယ်။
Apture Highlights - Apture Highlights ဟာ ကျွန်တော် သုံးဖူးသမျှ Dictionary ဆန်ဆန် Extensions တွေ အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ တောင်ထင်မိတယ်။ ဘာလို့လည်းဆို ဒီ Extension တစ်ခုတည်းနဲ့ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ / ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိလိုတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို Wiki အပါအဝင် နေရာပေါင်းစုံကနေပြီး တစ်ခါတည်း စုပြပေးနိုင်တယ်။ ဆက်စပ်နေတဲ့ Videos တွေ ဓာတ်ပုံတွေ ရှိမယ် ဆိုရင်လည်း တစ်ခါတည်း Tab ပြောင်းပြီး ကြည့်လို့ ရတယ် - အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါ။ သူ့လို ပုံစံမျိုးပဲ Wiki သီးသန့် Extensions တွေ ရှိပါသေးတယ် - ဥပမာ - Wikipedia - Wikipedia နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝီကီပိဒိယ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း ဆိုပြီး ရေးထားတာ ရှိပါသေးတယ်။
Fast YouTube Search - Youtube ဆိုတာကတော့ ဖျော်ဖြေရေးကနေ စပြီး ပညာရေး - သတင်း - အတင်း အကုန် တစ်နေရာတည်းကနေ ကြည့်နိုင်တဲ့ နေရာပါ - အရင်တုန်းကတော့ သီချင်းဆို မမောနိုင်မပန်းနိုင် ဒေါင်းလုပ်ချပြီး နားထောင်ခဲ့တာ နောက်ပိုင်း Youtube အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိသွားတော့ ဘာသီချင်းမှ တော်ယုံ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး နားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူး - တစ်ခုခု သိချင်လား Youtube - တစ်ခုခု နားထောင်ချင်လား Youtube နဲ့ သီချင်းဆို အဲ့မှာပဲ လိုတာရှာပြီး နားထောင်ဖြစ်တော့တယ်။ အဲ့လို ရှာတဲ့ဖွေတဲ့နေရာမှာ Youtube ကို သွားပြီး Search box ကနေ ရှာတာထက် ခု Extension လေးကို သုံးပြီး ရှာတော့ ပိုပြီး ရှာရလည်း မြန်သလို သုံးရလည်း ပိုလွယ်သွားပါတယ်။ Youtube နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Youtube ချစ်သူများ အတွက် မသိမဖြစ် ဆိုပြီး ရေးထားတာ ရှိပါတယ် - အသေးသုံးလေးတွေ သိလိုသူများ ဖတ်ကြည့်ပါ။
VerticalTabs - တစ်ချို့က အင်တာနက်ထဲ ဟိုဒီလျှောက်ကြည့်ရင် Browser မှာ tabs တွေ ဗြောင်းဆန်အောင် ဖွင့်ပြီးကြည့်တတ် ကြတယ် - ကျွန်တော့်လို လူပေါ့ - ဘာဖြစ်လဲဆို အဲ့လို tabs တွေ ၁၅ ခု - အခု ၂၀ လောက် ဖြစ်လာတော့ ပြဿနာက တက်လာရော - tab တစ်ခုပေါ် တစ်ခု ထပ်ပြီး ဘယ်ဟာက ဘာ tab မှန်း မသိတော့ဘူး - တစ်ခုတစ်လေ ပိတ်ချင်တဲ့ tab က တစ်ခု ပိတ်မိတဲ့ tab ကတစ်ခု အဲ့လိုလည်း ခဏခဏ ဖြစ်တယ် - အဲ့လို မဖြစ်ရအောင် tab များများဖွင့်ပြီး Websites ကြည့်တတ်သူတွေ အတွက် ဒီ Extension က အသုံးတည့်ပါတယ်။ သူနဲ့ သဘောတရားချင်း တူတဲ့ တစ်ခြား Extensions တွေလည်း ရှိသေးတယ် - ဥပမာ - TooManyTabs for Chrome
iReader - ဒီလို Extensions မျိုးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အင်တာနက်နှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို Extensions မျိုးတွေ သုံးသင့်လဲ ဆိုတာ အဲ့ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။ သူနဲ့ သဘောတရားခြင်းတူတဲ့ တစ်ခြား Extensions တွေ ရှိပါသေးတယ် - ဥပမာ - EasyReader
Proxy Switchy! - တစ်ခါတစ်လေကျရင် ဖြစ်တတ်တယ် - တစ်ချို့ Websites တွေက နိုင်ငံအလိုက် နေရာအလိုက် ဘန်းထားတာမျိုးတွေ - အဲ့လို အခြေအနေမှာ ကိုယ်ကြည့်ချင်တာ ကြည့်မရဖြစ်နေရင် ဒီလို Extensions မျိုးတွေက အသုံးတည့်ပါတယ်။ သူနဲ့ သဘောတရားတူတဲ့ တစ်ခြား Extensions တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ - 1-Click Web Proxy
Google Shortcuts - Google fun သမားတွေ အတွက် အသုံးအတည့်ဆုံး Extension ပါ - Shortcut တစ်ခုတည်းကနေ Google ရဲ့ နေရာပေါင်းစုံ သွားလို့ ရတယ်။ သူနဲ့ သဘောတရားတူတဲ့ တစ်ခြား Extensions တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ - ( 1 ) My Shortcuts -(2) One Number
Google Chrome Themes - Mozilla Firefox မှာ Themes တွေ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလို့ ရသလိုမျိုး Google Chrome မှာလည်း Themes မျိုးစုံ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
Minimalist Gmail - ဒီ Extension ကတော့ ကလိချင်တဲ့သူတွေ အတွက် သဘောကျစရာပါ။ Gmail ရဲ့ အတွင်း ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းချင်သလို ပြောင်း လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ ရတယ် - ဘာတွေလုပ်လို့ ရပါတယ်လို့ ပြောဖို့ မလွယ်လောက်အောင်ကို အကုန် လုပ်လို့ ရတယ်။ ပြောရင်ပိုတယ် ထင်မယ် စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
RemindMe - လူတိုင်းမေ့တတ်ကြတာပဲ - တစ်ခုခု လုပ်စရာရှိတယ် - မေ့တတ်တယ် - တစ်ခုခု သွားစရာရှိတယ် - မေ့တတ်တယ် - အဲ့လို မဖြစ်ရအောင် လုပ်ချင်တဲ့ အချိန် - သွားရမယ့် အချိန်မှာ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ကိုယ့်ကို အသိပေးနိုင်စေဖို့ ဒီ Extension က စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ခုဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆိုရင် သုံးသင့်မယ့် Google Chrome Extensions တွေ အကြောင်းကို မိသားစုဝင်များ တီးမိခေါက်မိ ရှိနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ခုဖော်ပြထားတဲ့ Extensions တွေဟာ အကောင်းဆုံးတွေလို့ မဆိုလိုပါဘူး - ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး Chrome Extensions များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား မိမိနဲ့ သင့်လျှော်ရာ သင့်လျှော်ရာ အသုံးတည့်မယ့် Chrome Extensions တွေကိုမူရင်းမျှဝေပေးနေတဲ့နေရာ ကနေ ရှာယူ အသုံးပြုကြဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
10:31 PM LeaveaComment Read More